सेन्टर फर अटिजम भोकेसनल ट्रेनिङ्गको समुद्घाटन | Seto Khabar
सत्ता पक्षले नै संसद् अवरुद्ध गर्न सक्ने
प्रतिनिधसभा पुनर्स्थापनापछिकाे पहिलाे बैठक आज, यस्ता छन् कार्यसूची
आज फागुन २३ गते आईतबार, कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् ! राशिफल
ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा ११५ सांसद उपस्थित
२०७७ फागुन १०, सोमबार (१ हफ्ता अघि)
काठमाण्डौँ । ब्याबहारिक र बैज्ञानीक शिक्षण पद्दती अबलम्बन गर्दै आएको विन्डी हाउस स्कुल बालुवाटारले यसै साता सेन्टर फर अटिजम भोकेसनल ट्रेनिङ्गको समुदघाटन गरेको छ।
उक्त समुदघाटन कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरुलाई स्वागत गर्दै सस्थाकी संस्थापक ललिता प्रसाईले स्वागत मन्तव्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा कान्ती बाल अस्पतालका पेडिएट्रिक डिपार्टमेन्ट हेड डाक्टर अजित रायमाझी, काठमाडौं महानगरपालिका बडा नम्वर चारका बडा अध्यक्ष मोहन बिष्ट, अर्किड गार्डेन नेपालकी डाइरेक्टर सुनिता खड्का, नेपाली कांग्रेसका सभासद रमेश प्रसाद न्यौपाने, प्याब्सनकी भाइस प्रिन्सिपल दिपीका थापा, संस्थागत अभिभावक संघका अध्यक्ष सुभाष भण्डारी लगायतका उच्च ब्यक्तित्व हरूको उपस्थित रहेको थियो।
कार्यक्रममा शुभकामना, मन्तब्य र सुझावहरू ब्यक्त गर्नु भएको थियो।
“सेन्टर फर अटिजमले भोकेसनल ट्रेनिङ्ग सेन्टर निकट भविस्यमै शाखा विस्तार गरेर लक्षित बर्गमा पुर्याउने योजना बनाएको र यसमा आफुलाई सबै तह र तप्काबाट सहयोगको आशा लिएको छु ।” सस्थापक ललिता प्रसाईले जानकारी गराउनु भयो।
विन्डी हाउस स्कुलकी प्रिन्सिपल तथा सेन्टरकी संरक्षक सृजना कोइरालाले भन्नुभयो, ” यो अत्यन्तै जिम्मेवार काम हो साथै अटिजम भएका बालबालिकाको अभिभावकहरूका लागि यो निकै खुशीको खबर पनि हो। थप जानकारी का लागि तलको लिङ्कमा क्लीक गर्नु होला।
शिवालय माविमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, १२० जनालाई विद्यालय पोशाक वितरण
फेकनको निर्वाचनमा बासु नेपाल नेतृत्वमा प्यानल घोषणा